Airline CEO: 'Standing room chete' kuuya kuVivaColombia munguva pfupi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Airline CEO: 'Standing room chete' kuuya kuVivaColombia munguva pfupi
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Colombia Breaking News • nhau • vanhu • Technology • ushanyi • kutakura • Trending Now
Vapfuuri vanogona kukurumidza kuona kuti inzvimbo yekumira chete mumakamuri emabhajeti avo - ndizvozvo kana VivaColombia muvambi William Shaw atora nzira yake.
Pfungwa yekubvisa zvigaro kuitira kuti vafambi vakwanise kumira nendege-pfupi inokwidzwa kwemakore. Iye zvino, CEO weiyo ndege yeColombia ari kutarisira kuzopedzisa hurongwa pasi.
"Kune vanhu kunze uko izvozvi vari kutsvagurudza kana uchigona kubhururuka wakamira - tiri kufarira kwazvo chero chinhu chinoita kuti kufamba kudhure," Shaw akaudza Miami Herald.
“Ndiani ane hanya kana iwe usina inflight varaidzo system yekufamba kweawa imwe chete? Ndiani ane hanya kuti hapana marara pasi ... kana kuti hautore nzungu dzemahara? ”
Kuti ndege yaShaw yakavezwa -mabhururu yaigona sei kuburuka pasi ndeyekufungidzira kweumwe munhu, asi haasi iye wekutanga maneja wendege kuyedza kuita kuti boka remombe rifambe zvakatonyanya.
Muna 2003, Airbus yakatanga kutenderera dhizaini yezvigaro zvingadai zvakakumbira vafambi kuti vatsamire kumashure kwechigaro chavo voisa makumbo avo pamusoro pechigaro.
Mutakuri webhajeti yeIrish Ryanair, iyo inove muridzi weVivaColombia, yakaronga nzvimbo dzakamira muna 2010. Panguva iyoyo, mukuru wendege Michael O'Leary akadonhedza Civil Civil Aviation Authority nekuratidza kuti zvigaro nemabhanhire echigaro zvaisakosha pendege.
"Kana pakaitika tsaona mundege, Mwari ngazvisadaro, bhandi repachigaro harikununure," akadaro. “Haudi bhandi repachigaro paLondon Underground. "Haudi bhandi repachigaro pazvitima zviri kufamba nemakumi maviri emakumi mapfumbamwe uye kana zvikadonha iwe wafa."
China's Spring Airlines, imwe inotakura bhajeti, yakasimudza tarisiro yekubvisa zvigaro gore rimwe chete zvisati zvaitika. Mutungamiri wendege, VaWang Zhenghua, panguva iyoyo vakati: "Pamutengo wakaderera, vafambi vanokwanisa kukwira mundege sekukwira bhazi ...
Parizvino, hapana mutyairi wendege akabvumidza kushandiswa kwe 'zvigaro zvakamira' chero kupi zvako pasi.